के गर्दै छन् ? सडकपेटीमा जोगीसँग पूर्वयुवराज पारस – Tufan Media News
के गर्दै छन् ? सडकपेटीमा जोगीसँग पूर्वयुवराज पारस
८ मंसिर २०७६, आईतवार १८:५२
काठमाडौं । पूर्वयुवराज पारस शाह पछिल्लो समय कुनै न कुनै विषयले चर्चामा आइरहेका छन् । सोनिका रोकायासँगको निकटताले होस् या ‘राजावादी’ नभनी नेपाली भन्न दिएको सुझावले उनी पछिल्लो समय चर्चामा आएका हुन् । यही बेला अहिले उनको एउटा तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । उक्त तस्विरमा उनी सडकपेटीमा बसेका छन् । उनको साथमा दुई जोगी र एउटा कुकुर देखिन्छ । पूर्वयुवराजसहित दुई जोगी हँसिलो मेद्रामा देखिएका छन् ।
तर, यो तस्विर कहाँ र कहिले खिचेको हो यसबारे केही खुलिसकेको छैन । सार्वजनिक यो तस्विरमा उनीहरु भूइँमै बसेका छन्, केही ओछ्याइएको छैन । पारस अगाडि एउटा मोबाइल देखिन्छ । परास र दुई जोगीले अगाडि हेरेका छन्, जसको अनुमान लगाउन सकिन्छ, उनी फोटो खिच्दा पोज दिइरहेका हुन् ।
क्यानडा नेपाल बाट साभार
८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को आठौं संशोधनको विरोध गर्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार निर्माण व्यवसायीले टेण्डर बहिस्कार गर्नेसम्मका छन् ।
महासंघले सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना बस्ने, आफ्नो कार्यालय र सबै निर्माण उपकरणमा कालो झण्डा राख्ने र कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनलगायतका २५ बुँदे माग राखी सरकारलाई दवाव दिन आन्दोलन गर्नुपरेको जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको २ सय भन्दा बढी आयोजनाहरुको म्याद थप नगरेको आरोपसमेत लगाए । अध्यक्ष सिंहले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिंदा बैंक क्रेडिट लाइन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा बैंकलाई बढी शुल्क तिर्नुपरेको भन्दै त्यसलाई हटाउनसमेत माग गरे । व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नभए कुनै पनि निर्माण प्रक्रियामा भाग लिन नसक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
व्यवसायीहरुले सरकारको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने गरी नियमावली संशोधन भएकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका हुन् ।